१९ चैत्र २०७४
वैज्ञानिकको ध्यान मानिसका अचम्मका बानी मध्ये एकमा छ– औँला पड्काउँदा आवाज किन आउँछ ? अमेरिका एवं फ्रान्सका सोधकर्ताहरुका अनुसार यसको कारण गणितको तीन समिकरणहरुको सहयोगबाट बताउन सकिन्छ । उनको मोडलबाट यो साबित हुन्छ की यो आवाज हड्डिहरुको जोर्नीमा रहेको तरल पदार्थमा निस्किने फोकाबाट हुन्छ । अचम्मको कुरा यो छ की यस प्रकियामा पुरै एक शताब्दीसम्म बहस भयो । फ्रान्समा विज्ञानका विद्यार्थी विनित चन्द्रन सुजा क्लासमा…विस्तृत समाचार »
​१० मिनेटमा दोहोरिनुपर्ने अलार्म किन ९ मिनेटमा दोहोरिन्छ ? यस्तो रहेछ बैज्ञानिक कारण
हरेक बिहान जब अलार्म बज्छ तब तपाई त्यसलाई बन्द गरिदिनु हुन्छ, सोच्नु हुन्छ कि बस ‘बस दश मिनेट अरु सुतौ ।’ शायद तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ त्यो दश मिनेट होइन बरु नौ मिनेट हुन्छ । तर नौ नै किन ? यसको जवाफ जान्नका लागि हामी विगत समयमा फर्कनुपर्ने हुन्छ, जब स्नुज बटनको आविस्कार गरिएको थियो। स्नुज बटनको सहयोगमा हामी अलार्मलाई केही समयका लागि अगाडि बढाउन…विस्तृत समाचार »
सबैलाई थाहा नहुनसक्छ औंठा छापको वैज्ञानिक कारण
हाम्रो समाजमा कुनै स्थायी चीज लेनदेन गर्दा काजमा लेखोट गरी औंलाको ल्याप्चे (finger print) छाप लगाउने चलन धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएको पाइन्छ । घर–जग्गा लिँदा होस् या नागरिकताको प्रमाणपत्र लिँदा अथवा ऋण–सापटी लिँदा होस–यस्तै महत्वपूर्ण कामको लेनदेनमा दायाँबाँया हातका बुढी औंलाको ल्याप्चे छाप लगाउनुपर्छ भन्ने वित्तिकै पढेलेखेका वा अनपढ पनि औंलाको छाप किन लगाउने भन्ने कुनै जिज्ञासा नराखी छाप लगाउन औंला तेस्र्याउँछन् । कागजमा ल्याप्चे…विस्तृत समाचार »
कुखुराको फुलबाट किन जन्मिदैन जिराफ ? आँपको बोटमा किन फल्दैन गोलभेँडा ?
मान्छेले मान्छेलाई जन्म दिन्छ । त्यसरी नै खरायोले खरायो जन्माउँछ । तर, तपाईंले कहिल्यै कल्पना गर्नुभएको छ, मान्छेको कोखबाट खरायो या कुखुराको फुलबाट जिराफ किन जन्मिन सक्दैन । आँपको बोटमा आँपमात्र फल्छ, गोलभेँडा किन फल्दैन ? अर्को कुरा, तपाईं आफ्ना आफन्तहरुलाई देख्नासाथ कसरी चिन्नुहुन्छ ? मतलब, राम, श्याम, नीरज, धीरजबीचको भिन्नतालाई तपाईं कसरी छुट्याउन सक्नुहुन्छ ? रामलाई श्यामबाट भिन्न बनाउने आधार के–के हुन् । झट्ट…विस्तृत समाचार »
धुम्रपानको लत छोड्ने नयाँ काइदा, –इलेक्ट्रोनिक्स चुरोट
यदि तपाई लाखौं कोसिस पछि पनि चुरोट छाड्न सक्नुभएन भने ई–चुरोटले तपाईलाई सहयोग गर्न सक्छ । ई–चुरोट धुम्रपानभन्दा ९५ प्रतिशत कम हानिकारक मानिन्छ । पब्लिक हेल्थ इङ्ल्याण्ड (पीएचई)ले हालैै गरेको एक रिपोर्टमा भनिएको छ, प्रत्येक बर्ष करिब २० हजार मानिसहरु ई–चुरोटको माध्यमबाट धुम्रपान छोडिरहेका छन् । डाक्टरले आफ्ना बिरामीलाई ई–चुरोट अपनाउन सल्लाह दिनुपर्ने पीएचईले सिफारिस गरेको छ । साथै अस्पतालमा ई–चुरोट बेच्नको लागि अनुमति दिनुपर्छ…विस्तृत समाचार »
​सन् २०५० सम्म सूर्य अप्रत्याशित रुपमा चिसो हुने
हाल गरिएको एक नयाँ अध्ययनबाट जारी प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०५० सम्ममा सूर्यको तापक्रम अप्रत्याशित रुपले घट्ने देखाएको छ । क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरुले सौर्य चक्रकाबारेमा अध्ययन गर्दा यस्तो तथ्य भेटिएको जारी प्रतिवेदनमा बताइएको हो । उनीहरुले त्यतिबेला सम्ममा सूर्यको तापक्रम सात प्रतिशतसम्म घट्नसक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सूर्यको तापक्रम घटेपछि पृथ्वीमा पर्ने तापक्रम पनि कम हुने भएको छ । तर चिसो हुनेक्रम संसारभर एकैनासको भने…विस्तृत समाचार »
मानवीय ज्यादतीका कारण पृथ्वी दिन प्रतिदिन तातिँदै गएको र बेलैमा सचेत नहुने हो भने यो भयावह हुने चेतावनी वैज्ञानिकहरुले दिएका छन् । अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासा र बेलायती मौसविदहरुले गएको वर्ष २०१७ सबैभन्दा गर्मी वर्ष बनेको जनाएका छन् । १६७ वर्ष यताको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा गएको वर्ष सबैभन्दा बढी गर्मी रहेको दुई संस्थाले जनाएका हुन् । सामुद्रिक मौसम परिवर्तनको चक्र ‘अल नीनो’ बिनानै गर्मीको पारो…विस्तृत समाचार »
​विकिपेडियाबारे नसुनेका तथ्य : ‘सेक्स’ सबैभन्दा प्रसिद्ध लेख, एक लाख १५ हजार सक्रिय सम्पादक
विकिपेडियाबारे अधिकांश इन्टरनेट प्रयोगकर्ता जानकार नहुने कुरै भएन । कुनै ठाउँ, व्यक्ति या विषयको जानकारी लिन पनि विकिपेडियाको सहारा लिने गरिन्छ । तर, दिनहुँजसो विकिपेडियामा प्रवेश गर्ने तपाईंलाई यसबारे कत्तिको थाहा छ । विकिपेडिया कसले सुरु गर्यो, कहिले सुरु भयोदेखि यहाँ सबैभन्दा बढी पढिने लेख र बढि खोजिने व्यक्तिसम्मको जानकारी लिनुहोस् । जान्नुहोस् विकिपेडियाबारे २० तथ्य : १. विकिपेडियाको सुरुवात जिमी वेल्स र लेरी संग्रा नामका…विस्तृत समाचार »
मौसम पूर्वानुमानलाई विश्वसनीय बनाउने तयारी, सूचना प्रणाली आधुनिकीकरण गर्न राडार जडान गरिँदै
मुलुकको मौसमी सूचना प्रणालीलाई विश्वस्तरको बनाउने लक्ष्यसहित जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अत्याधुनिक मौसमी राडार जडान प्रक्रिया शुरु गरेको छ । विभागले मौसमी सूचनालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नेपालमा पहिलो पटक सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरमा राडार जडान गर्न थालेको हो । मौसमी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न तीनवटा मौसमी राडार जडानको प्रक्रिया शुरु भइसकेको विभागका महानिर्देशक डा ऋषिराम शर्माले जानकारी दिए । सुर्खेतको रातानाङ्ला, पाल्पाको सिद्धिकोट र…विस्तृत समाचार »
२५ पौष २०७४
स्मार्टफोन निर्माता कम्पनीले धेरै क्षमताको ब्याट्री सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तर पनि मोबाइलले धेरै लामो समय ब्याट्री टिकाउँदैन । मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि भने ब्याट्री सकिने चिन्ता भइरहन्छ । मोबाइलको ब्याट्री बढाउन यस्ता खालका उपाय अपनाउन सकिन्छ – १. यदि तपाई गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ भने कारको ड्यासबोर्डमा नराख्नुस् । साथै फोनलाई पनि सनलाइट पनि कम गरिराख्नुस् । किनकि गर्मीले पनि ब्याट्रीको आयुलाई कम गर्ने गर्छ ।…विस्तृत समाचार »